दुर्घटनामा एकको मृत्यु, प्रदेश सांसदसहित १४ घाइते- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
माघ २४, २०७५ दुर्गालाल केसी
दाङ — लमही–घोराही सडकखण्डअन्तर्गत घोराही उपमहानगरपालिका ३ चिसापानीमा बिहीबार बेलुका यात्रुवाहक बस र कार ठोक्किँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परी रुकुम पश्चिम मुसीकोटकी २६ वर्षीया रमिता शर्माको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा कारमा सवार दाङ क्षेत्र नं. ३ ख का प्रदेश सांसद उत्तरकुमार ओलीसहित १४ जना घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते ओलीलाई थप उपचारका लागि कोहलपुर लगिएको छ।
हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं लैजान खोजिए पनि खराब मौसमले सम्भव नभएको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य घाइतेहरुको लमहीस्थित फ्लोरेन्स र लमही अस्पतालमा उपचार भइरहेको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अरुणकुमार सिंहले बताए। तुलसीपुरबाट बिरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ५५२९ नं. को बस र लमहीबाट घोराहीतर्फ जाँदै गरेको बा १८ च ६८३६ नं. को कार ठोक्किँदा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनाको कारणबरे अनुसन्धान भइरहेको सिंहले जानकारी दिए।
प्रकाशित : माघ २४, २०७५ १८:४८
दमौली — तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । सोही वडाकी २७ वर्षीया एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका उनलाई जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको एकल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो ।
बलात्कारका अरोपी वडा अध्यक्ष रेग्मीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको न्यायाधीश ढकालले बताए। ‘जाहेरीवाली र मौका घटना विवरणका व्यक्तिहरूलाई बकपत्रका लागि बोलाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने,‘त्यसका लागि सरकारी वकिल र प्रहरीलाई जाहेरीवालीलाई झिकाउन निर्देशन दिएको छु।’
पीडित महिलाले गत मङ्सिर ६ गते वडाध्यक्ष रेग्मीले आफूलाई बलात्कार गरेको निवेदन इलाका प्रहरी कार्यालयमा दिएपछि फरार भएका रेग्मीले माघ ७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।
प्रकाशित : माघ २४, २०७५ १८:४६